1. Izithako ezinikeza kokubili ukunambitheka okumnandi futhi okumnandi Zingenziwa zibe isidlo sesiginesha wonke umuntu azothanda, njenge spaghetti, isaladi, noma njengesidlo sasekuseni esimnandi. Ikakhulukazi ekupheleni konyaka Obani abazoba nephathi endlini Namuhla sinendlela yokwenza ubhekeni sisebenzisa uhhavini ukwengeza okukhaliphile, okumnandi nephunga ezindlini ezintathu, izindlu eziyisishiyagalombili. Ngemenyu enothe ngamaprotheni namafutha ukujabulela isimo sezulu esipholile vele usebenzise i-ovini elula ukuthola ukudla noma izithako zokuhambisana nenkambo eyinhloko.
2. Yini ubhekeni? Abantu abaningi abazi okwamanje !! Ngoba ubhekeni wenziwa esiswini sengulube Kepha ingezwe ngemuva kokufaka usawoti nokushiya isikhathi esithile. Ubizwa ngokuthi ungeziwe noma wengezwe ekulondolozweni kokudla ukuze uhlale udla isikhathi eside. Amanzi, usawoti, ushukela, i-sodium nitrite kanye ne-sodium ascorbate kuphela okuyizinqubo zokulondolozwa ezisetshenziswa ekukhiqizeni inyama enamakha. Lawula izinga lokushisa bese ulishiya lize libe lapho Izisetshenziswa ezisetshenziselwa ukubhaka ubhekeni • Ubhekeni wekhwalithi ephezulu • Ipuleti lebhekeni elibhakiwe elingamelana nokushisa • Ihhavini
3. Beka izingcezu zebhekoni epuletini noma ethreyini yokubhaka. Ngokuvula ubhekeni ukuze inyama isongwe noma imbozwe ngenye ingxenye Ukuthola ukushisa kulo lonke ipuleti Ingabekwa ngaphezulu koqweqwe lwe-aluminium esetshenziselwa ukupheka. Ukuhlanza okulula
4. • Beka ipuleti lebhekeni elilungisiwe kuhhavini. Bese usetha izinga lokushisa ku-205 •. • Bhaka ubhekeni ohlangothini lokuqala imizuzu engu-12-15. • Jikela ubhekeni ngakolunye uhlangothi. Bese ufaka kuhhavini isikhathi esifanayo
5. Kuhlanzekile, kuhle, khipha ukuhlela ipuleti
6. Imenyu emnandi esebenzisa ubhekeni kuhhavini ngokuphelele futhi kalula ingadliwa njengesikhalazo esingenalutho ngenxa kasawoti wayo, oily, ukunambitheka okuncane okumnandi nephunga lezinkuni ezisuka entuthuni. Kuyisikhalazo esibucayi. Bayifaka esinkweni, ushizi nemifino abayithandayo yiVanwich Bacon izingane ezingasoze zalukhohlwa. Yifake kwisaladi yemifino bese ufaka ushizi, yisaladi likaKesari, isidlo esimnandi enhliziyweni yakho. Fafaza i-spaghetti carbonala Kwengeza ubumnene ekudleni okuthandwa yiwo wonke umuntu kunambitheka kangcono kepha, ubhekeni wukudla okunamafutha amaningi. Ukudla ngokulinganisela kuzuzisa umzimba. Kodwa ukudla kakhulu Ngokuqinisekile kungaba nomphumela omubi Ake senze izitsha ezimnandi Ngonyaka wephethini, kusuka ngendlela elula ebhakwa nge-oveni, iphunga lephunga liyasakazeka, linezela imfudumalo nezinkumbulo zeholide.